Shop ရဲ့ (၆)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် Shop Anniversary မှာ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေပါဝင်လာမှာလဲ? - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Shop ရဲ့ (၆)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် Shop Anniversary မှာ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေပါဝင်လာမှာလဲ?0203
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-commerce (အွန်လိုင်းအခြေပြု ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း)ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေ၊ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ 9.9 Super Saleမှာ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 9.9 Super Sale ကြီးမှာ တစ်ခဲနက်ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ရော 9.9 Super Sale မှာ မဝယ်လိုက်ရတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေအတွက် နောက်ထပ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုဟာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ အဲ့တာကတော့ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို အထူးလျှော့စျေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ ရောင်းချပေးမယ့် Shop Anniversary Sale 2020စျေးရောင်းပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop Anniversary စျေးရောင်းပွဲတော်ဟာဆိုရင်လဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး Shop ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာတော့ ၆နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး Shop မှာ အစဉ်တစိုက်အားပေးလာကြတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို ကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို လျှော့စျေးအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးက တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို စျေးတန်တန်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ Shop Anniversary မှာဆိုရင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေမှစပြီး ယောကျာ်းလေး/မိန်းကလေး ဝတ်ဖက်ရှင်တွေ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ အလှကုန်တွေ၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ ခလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင် အခြားကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
Countdown Deals – Shop Anniversary ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ကြိုတင်ရင်ခုန်ခံစားသည့်အနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၉ မှ ၁၁ ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများကို အကောင်းဆုံးသော လျှော့ဈေးတွေဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Refer and Win အစီအစဉ်လေးမှာတော့ Shop App ကို အောက်တိုဘာလ ၉ မှ ၁၆ ရက်နေ့အတွင်း သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေများထံသို့မျှဝေပြီး အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ ရယူလိုက်ပါနော် ။
Review and Win အစီအစဉ်ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အတွင်း Shop မှဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းပေါ် Reviewအများဆုံး ပေးပြီး ၁၀% လျှော့စျေးအများဆုံး ၂၀၀၀ ကျပ်တန် လျှော့စျေးကူပွန်ကိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Review ရေးပေးတဲ့အခါ အနည်းဆုံးဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ နှင့် စာသားပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးရမှာဖြစ်ပြီး ကံထူးသူအယောက် ၁၀၀ကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါ။ ကံထူးသူများအားလုံးကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Shop App Noti ဒါမှမဟုတ် Customer Service မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ကအကြောင်းကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Gaming Week မှာဆိုရင်တော့ ကံထူးရှင် ၁၁ ယောက်အတွက် ၁ သောင်းတန်ကူပွန်တစ်ခုစီ ရရှိနိုင်မည့် Game of the Day Challenge၊ အများဆုံး ၁၆,၀၀၀ ကျပ်တန်ကူပွန်အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Tournament Games Coupons၊ ဂိမ်းဆော့ပြီးရရှိလာမယ့်ပွိုင့်တွေကို ကူပွန်နဲ့လဲလှယ်နိုင်မယ့် Exchange Points to Couponsစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်သွားမှာပါ။ Gaming Week မှ Game တွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့မှ ၁၁ရက်နေ့အတွင်း စတင်ကစားနိုင်ပြီး ရမှတ်များလေ Winner ဖြစ်နိုင်လေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Shake Shake အစီအစဉ်ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့၊ ၁၁ရက်နေ့၊ ၁၃ရက်နေ့နဲ့ ၁၅ရက်နေ့တို့တွင် ညနေ ၆နာရီမှ ၉နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး လျှော့စျေးကူပွန်တွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Happy Hour အစီအစဉ်မှာဆိုရင် အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့နှင့် ၁၆ရက်နေ့ တို့တွင် ညနေ ၄နာရီမှာ ၆နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက်ဝယ်သူတွေအတွက် သက်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များသို့ ပို့ဆောင်ခ ၂၅၀၀ကျပ်လျှော့ပေး၍ ပို့ဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop Anniversary 10.10 စျေးရောင်းပွဲတော်မှာ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင် အခြားအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါသေးတယ်။
Review and Win အစီအစဉ်ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အတွင်း Shop မှဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းပေါ် Reviewအများဆုံး ပေးပြီး ၅၀,၀၀၀ ကျပ်တန် စျေးဝယ်ကူပွန်ကိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Review ရေးပေးတဲ့အခါ အနည်းဆုံးဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ နှင့် စာသားပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးရမှာဖြစ်ပြီး ကံထူးသူအယောက် ၁၀၀ကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါ။ ကံထူးသူများကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Shop App Noti မှတစ်ဆင့် ကြေငြာပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Daily App Visit Challenge ဟာဆိုရင်တော့ ၉ရက်နေ့မှစတင်၍ ၁၆ရက်နေ့ထိ နေ့စဉ် ညနေ ၄နာရီတိုင်း မိမိဆောင်ရွက်ရမယ့် Taskတွေကို ‌Shop App ရဲ့ Daily Progress နေရာမှာ ကြည့်ရှု၍ ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ရက်အလိုက်မိမိပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Taskတွေကိုအလိုက် ရရှိနိုင်တဲ့ ကူပွန်ကုဒ်တွေကတော့
၅ ရက်ဆက်တိုက်Taskပြီးမြောက်ခြင်း = အနည်းဆုံး ၀ယ်ယူမှု ၆၀၀၀ ကျပ်အတွက် ၁၀၀၀ကျပ်လျှော့စျေးကူပွန်ကုဒ်
၈ ရက်ဆက်တိုက်Taskပြီးမြောက်ခြင်း = အနည်းဆုံး ဝယ်ယူမှု ၈၀၀၀ ကျပ်အတွက် ၂၀၀၀ကျပ်လျှော့စျေးကူပွန်ကုဒ်
ဆုရရှိတဲ့သူတွေကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်နေ့တွင်ကြေငြာပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Gaming Week မှာဆိုရင်တော့ ကံထူးရှင် ၁၁ ယောက်အတွက် ၁ သောင်းတန်ကူပွန်တစ်ခုစီ ရရှိနိုင်မည့် Game of the Day Challenge၊ အများဆုံး ၁၆,၀၀၀ ကျပ်တန်ကူပွန်အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Tournament Games Coupons၊ ဂိမ်းဆော့ပြီးရရှိလာမယ့်ပွိုင့်တွေကို ကူပွန်နဲ့လဲလှယ်နိုင်မယ့် Exchange Points to Couponsစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်သွားမှာပါ။ Gaming Week မှ Game တွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အတွင်း စတင်ကစားနိုင်ပြီး ရမှတ်များလေ Winner ဖြစ်နိုင်လေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Shake Shake အစီအစဉ်ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့၊ ၁၁ရက်နေ့၊ ၁၃ရက်နေ့နဲ့ ၁၆ရက်နေ့တို့တွင် ညနေ ၆နာရီမှ ၉နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး လျှော့စျေးကူပွန်တွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop Anniversary မှာပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Link မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Shop App ကို Download ပြုလုပ်ရန် – Link
Buy your favorite products in this year’s biggest sale with best deals and discounts in this 10.10 sale only from shop.com.mm
Previous Articleအိမ်မှာနေရင်းကိုယ်တိုင်ဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်မည့်ပစ္စည်းများနဲ့နည်းလမ်းကောင်းများNext Articleသားသားမီးမီးတို့အကြိုက် အရသာရှိပြီး အားဖြစ်စေမည့် Snack များ